दाहालले ओलीलाई निवासमै पुगेर तर्साए
२०७३ असार २४ शुक्रबार, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निवासमै गएर तर्साएका छन् । विहान बालुवाटार पुगेका अध्यक्ष दाहालले सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको र आफुहरुसंग भएको सहमतिबारे मौन बसेको भन्दै अब धेरै दिन सहेर नबस्ने भन्दै तर्साएका हुन् । ती दुईको छलफलबारे प्रेस सल्लाहकार, प्रेस संयोजक र निजि सचिव बेखबर छन्। प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले ए हो र कतिवेला छलफल भो थाहा भएन–भने । यस्तै, प्रेस संयोजक च ... बाँकी अंश»
२०७३ असार २४ शुक्रबार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा अयोधीप्रसाद यादवको नाम सर्वसम्मतीले अनुमोदन भएको छ । शुक्रबार विहान संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको सुनुवाई समिति बैठकले आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित यादवको नाम सर्वसम्मतीले अनुमोदन गरेको हो । समिति सचिवालयले तत्काल अनुमोदन गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई पठाउने छ । राष्ट्रपतिले एक दुई दिनमा यादवलाई पमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने समिति सभापति चिनका ... बाँकी अंश»
बाढी पहिरोमा ४७ जनाको मृत्यु, १६ बेपत्ता
२०७३ असार २४ शुक्रबार, काठमाडौँ । गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले गत वैशाख यता मुलुकका विभिन्न भागमा भएका बाढी पहिरोका घटनामा परी ४७ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १६ जना बेपत्ता भएको जानकारी दिनुभएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा जानकारी गराउने क्रममा उहाँले यो अवधिमा भएका १२१ वटा बाढी पहिरोका घटनामा परेर ५७ जना घाइते भएको बताउनुभयो । बाढी पहिरोबाट १३८ घर पूर्ण क्षति हुनुका साथै १६० मा आंशिक क्षति पुगेको उहाँले सदनलाई जानकारी दिन ... बाँकी अंश»
डा कोइरालाको सिटिस्क्यान गरियो, ‘बिहान चिया र जुस खानुभयो’ –डा. जोशी
२०७३ असार २४ शुक्रबार, काठमाडौं । ‘नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ । शरीरका सबै अंगले काम गर्न थालिसकेका छन् । आइसीयुमा रहेका कोइरालाको बिहान सिटिस्क्यान पनि गरिएको छ । यसको रिपोर्ट आउन भने केही समय लाग्नेछ । डा. लवनरसिंह जोशीले ‘हामीले सिटिस्क्यान सबै हेरिसकेका छैनौं, सबै डाक्टरहरु आइसकेपछि हेरेर छलफल गर्छौं । त्यसपछिमात्र बाहिर ल्याउँछौं’ भने । डा. जोशीले कोइरालालाई बिहान चिया र जुस खान दिएको ... बाँकी अंश»
डा. कोइरालालाई अब निमोनियाको चाप, चिकित्सक भन्छन्–‘ढुक्क हुनुस् तर हामीले बोल्न मिल्दैन’
२०७३ असार २४ शुक्रबार, काठमाडौं । ‘नेपाली कांग्रेस महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाको अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ । शरीरका सबै अंगले काम गर्न थालिसकेका छन् । फोक्सोमा इन्फेक्सन भएकाले छातीबाट इन्फेक्सन निकाल्ने काम भइरहेको छ । अब केवल समस्या निमोनियाकोमात्र हो ।’ कस्तो छ त डा. कोइरालालाई ? भनी हाम्राकुराको जिज्ञासामा स्वासै नफेरि बढो उत्साहका साथ कोइरालाका सहयोगी भरत तिवारीले भनेका वाक्य हुन् यी । ओम अस्पताल चाबहिलमा आइसीयुमा उपचाररत डा. कोइरालाको स्वास्थ् ... बाँकी अंश»
शशांकले पार्टी सभापति देउवालाई आइसीयुमै फर्काए जय नेपाल
२०७३ असार २३ बिहिबार, काठमाडौं । कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको अवस्था बुझ्न ओम हस्पिटल पुगेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई डा. कोइरालाले आइसीयुमै जय नेपाल फर्काएका छन् । साँझ ७ बजेपछि हस्पिटल पुगेका सभापति देउवाले आइसीयुमा भेटेर बाहिर आएपछि सभेच्छुकहरुसँग कुरा गर्दै आफुले कस्तो छ भनेर सोध्दा ‘दुई हात जोडेर’ जय नेपाल फर्काएको सुनाए । डा. कोइरालाको मुखमा अक्सिजन माक्स भएकाले प्रतिक्रिया दिन सकेनन् । तर दुई हात जोडेर जय नेपाल फर्काएको देउवाले ह ... बाँकी अंश»
माओवादी केन्द्रले महाधिवेशन मिति तोक्यो, के–के गर्दैछ (निर्णयसहित)
२०७३ असार २३ बिहिबार, काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी पुस २३ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पोलिटब्युरोको बैठकले पुसमा पार्टीको आठौँ महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । एकीकृत नेकपा(माओवादी), नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा(माओवादी), क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीलगायत विभिन्न दश वटा माओवादी घटक तथा समूहको एकतापछि गठन भएको माओवादी केन्द्रले महाधिवेशनको मि ... बाँकी अंश»
डा. शशांकको स्वास्थ्यमा चामत्कारिक सुधार
२०७३ असार २३ बिहिबार, काठमाडौं । कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाको स्वाथ्यमा चामत्कारिक सुधार भएको छ । यो चामत्कारिक सुधार हो । हामीलाई यति चाँडै सुधार हुन्छ भन्ने लागेको थिएन । सबै चिकित्सकको प्रयासले सम्भव भयो । वुधबार हामीलाई कसरी बचाउने भन्न पीर थियो । यति चाँडै सुधार होला र भेन्टिलेशनबाट बाहिर निकाल्ने अवस्था आउला भन्ने सोचेका थिएनौं । ओम हस्पिटलका चिकित्सक लवनरसिंह जोशीले विस्तारमा भने । आइसीयुमा राखिएकाले अझै उहाँ खतरामुक्त भने भइसक्नु ... बाँकी अंश»
‘सई साव, असई साव’ ग्रेड घटुवा :‘कोही हल्लिदै डिउटी आउँथे, कोही खेतालाबाट डिउटी लगाउँथे’
२०७३ असार २३ बिहिबार, कन्चनपुर । ‘कोही जाँड गन्हाउँदै, हल्लिदै डिउटीमा आउँथे । कोही खेतालाबाट डिउटी लगाउँथे । कोही कयौं समय बाहिर हराउँथे । प्रहरीको डिउटी र काम नबुझेर यस्तै गतिविधि गर्ने २५ जनालाई कारबाही गरेका छौं ।’ कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) तुलसी अधिकारीले हाम्राकुरालाई सुनाए । उनले भने, ‘सई साव, असई सावसहित २५ जना कारबाहीमा परेका छन् ।’ एसपी अधिकारीका अनुसार पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा यस्ता विभिन्न त्रुटी गर्ने २५ जना मध्ये कसैलाई ... बाँकी अंश»
झलनाथ चीन पुगेकोबारे पार्टीलाई जानकारी छैन, ‘नैतिकता तोडे’
२०७३ असार २३ बिहिबार, काठमाडौं । एमाले वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल चीन भ्रमणका क्रममा छन् । तर खनाल भ्रमणमा गएकोबारे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी छैन । हामीले खनाल चीन पुगिसकेपछि थाहा पायौं । उहाँले कुनै जानकारी गराउनु भएन । विशुद्ध व्यक्तिगत भ्रमण भएकाले पनि होला पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हाम्राकुरासंग भने, ‘उहाँको उपचार भ्रमण रहेछ । छोरा र धर्मपत्नी संगै जानु भएको छ ।’ थाइराडको उपचारका लागि जानु भएको ... बाँकी अंश»
डा सशांकलाई भेन्टीलेटरबाट निकालियो
२०७३ असार २३ बिहिबार, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाको भेन्टिलेटरबाट केहीबेर अघि बाहिर निकालिएको छ। मेकानिकल लाइफ सपोर्ट सिस्टममा रहेका डा शशांकलाई भेन्टिलेटरबाट निकालिएको हो। भाइलाई भेन्टीलेटरबाट बाहिर निकालेपछि दाइ डा शेखर कोइराला खुसी हुँदै बाहिर निस्किएका छन्। उनले त्यो खुसी परिवारका सदस्यहरु र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुसँग बाँडेका थिए। महामन्त्री कोइरालाको रक्तचाप, अक्सिजनको मात्रा र पिसाबमा निकै सुधार आएपछि उनलाई भेन्ट ... बाँकी अंश»
तीन उपप्रधानमन्त्री कोरला नाकामा
२०७३ असार २३ बिहिबार, म्याग्दी। चीनसंग सीमा जोडिएको कोरला नाकाको अवलोकन र बस्तुस्थिति अध्ययन गर्न तीनजना उपप्रधानमन्त्री सहितको सरकारी टोली बिहीबार सीमा क्षेत्र पुगेका छन्। उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार, भीम रावल, टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, अर्थराज्यमन्त्री दामोदर भण्डारी, सडक विभागका महानिर्देशक माधब कार्की, रक्षा सचिब महेश दाहाल, मुस्ताङका सांसद श्रीमायाँ थकाली, महेन्द्र शेरचन र रोमी गौचन सह ... बाँकी अंश»
वर्तमान सरकार केही दिनभित्र विस्तार हुन सक्छ : प्रधानमन्त्री ओली
२०७३ असार २३ बिहिबार, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार केही दिनभित्र विस्तार हुन सक्ने बताएका छन्। भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित ‘भूमि व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती र समाधान’ विषयको राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने – “सरकार परिवर्तन हुने कुरा हल्ला मात्रै हो। यो दायाँबायाँ हुँदैन।” सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमअनुसारका योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गर्दै उनले भूमिसम् ... बाँकी अंश»
विशेष नमाज पढेर इद उल फित्र मनाइँदै, शुभकामनासहित !
२०७३ असार २३ बिहिबार, काठमाडौँ । अरबी पात्रोअनुसार दसौँ महिनाको पहिलो दिन आज मुस्लिम समुदायले विशेष नमाज पाठ गरी ठूलाबडाबाट आशीर्वाद लिएर इद उल फित्र पर्व मनाइँदैछन् । खुसीपूर्वक शरीरको दान गरेर दिनदुःखी एवम् गरिबलाई बाँडिने भएकाले यो पर्वलाई इद उल फित्र भनिएको हो । अरबी पात्रोअनुसार नवौँ महिनाको अन्तिम दिन हिजो बेलुकी चन्द्रमा देखिएपछि आज इद उल फित्र मनाउन लागिएको नेपाली जामे मस्जिदका सचिव मन्सुर हुसेनले जनाए । “दशौँ महिनाको पहिलो दिनलाई शौवाल भनि ... बाँकी अंश»
डा. कोइरालाको स्वास्थ्यमा अपेक्षाकृत सुधार,रुनुभयोः भरत तिवारी
२०७३ असार २३ बिहिबार, काठमाडौं । चावहिलमा रहेको ओम अस्पतालको भेन्टिलेटरमा रहेका नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा सशांक कोइरालाको स्वास्थ्यमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छ । मंगलबार साँझ ८ बजे उपचारका लागि गएका कोइरालालाई बुधबार बिहान गम्भीर अवस्थामा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ । आज बिहान भने चिकित्सकको टोलीले अपेक्षाकृत सुधार भएको पाएको हो । भेन्टिलेटरमा राखेको २४ घण्टा पछि डा कोइरालाको स्वास्थ्यमा सुधार भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सहरुले जनाएका छन्। चिकि ... बाँकी अंश»
डा. सशांकको ब्रेनडेथको कुरा अफवाह मात्रै, डाक्टरले बोलाउँदा आँखा खोले (अडियो सहित)
२०७३ असार २२ बुधबार, काठमाडौं । बुधवार बिहान साँढे ५बजेबाट काठमाडौंको चावहिलमा रहेको ओम अस्पतालको भेन्टिलेटरमा रहेका नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाले पहिलो पटक भेन्टिलेटरमा प्रतिक्रिया जनाएका छन् । साँझ साढे ६ बजे उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको टोलीले बोलाउँदा उनले आँखा खोलेको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा लवनरसिंह जोशीले जानकारी दिए। यसरी प्रतिक्रिया जनाएसँगै दिनभर डा. कोइरालाको ब्रेनडेथ भएको भन्ने कुरा पनि अफवाह मात्रै रहेको पुष्टि भएको छ । डा. जोश ... बाँकी अंश»
"डा. शशांकको स्थिति गम्भीर, यसै भन्न सकिन्न्" (अडियो सहित)
२०७३ असार २२ बुधबार, काठमाडौ । भेन्टीलेटरमा राखेर चावहिलको ओम अस्पतालमा उपचाररत नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. सशांक कोइरालाको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार नआएको तथा अझ गम्भीर रहेको डाक्टरहरुले दिउसो ३ बजे गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ । डा लव जोशीले जानकारी दिए अनुसार एसै भन्दा नसकिने र बिहानको भन्दा लिभर र किट्नीको अवस्था झन बिग्रिएको बताएका छन् । लाइफ सपोर्टमा राखिएको डा जोशीले बताए । ३ बजे बितरित बिज्ञप्तिमा रक्तचाप १००/५० बताइएको छ भने मुटुको धड्कन प्रतिम ... बाँकी अंश»
डा. सशांक कोइरालाको अवस्था उस्तै, सरकारी अधिकारीसमेत भेट्न पुगे
२०७३ असार २२ बुधबार, काठमाडौं । मेसिनको सहायतामा गम्भीर अवस्थामा चावहिलको ओम अस्पतालमा उपचाररत नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा। सशांक कोइरालाको अवस्था जटिल नै रहेको छ । डा। कोइरालाको गम्भीर एवं स्थीर अवस्थामा चावहिलको ओम अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ । भेन्टिलेटरकै अवस्थामा गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको पाएपछि विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकताका साथै सरकारी अधिकारीहरुसमेत डा. कोइरालाको अवस्था बुझ्न ओम अस्पताल पुगेका छन् । सरकारी अधिकारीहरु ... बाँकी अंश»
डा. सशांक कोइरालालाई भेटेर भक्कानिइन् सुजाता कोइराला
२०७३ असार २२ बुधबार, काठमाडौं । मेसिनको सहायतामा गम्भीर अवस्थामा चावहिलको ओम अस्पतालमा उपचाररत नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा। सशांक कोइरालाको अवस्था जटिल बन्दै गएपछि कोइरालाको परिवार अताल्लिएको छ । डा. कोइरालाको गम्भीर एवं स्थीर अवस्थामा चावहिलको ओम अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ । भेन्टिलेटरकै अवस्थामा देखेपछि काँग्रेस नेतृ एवं डा. कोइरालाकी दिदी सुजाता कोइराला निकै भावुक हुँदै अस्पतालबाट बाहिरिएकी छिन् । उनले रोक्न खोजे पनि आँखाबाट आँ ... बाँकी अंश»
डा.कोइरालाको अवस्था बिहान ८ बजेको जस्तै, चिकित्सकहरु फेरि जुट्दै
२०७३ असार २२ बुधबार, काठमाडौं । मेसिनको सहायतामा गम्भीर अवस्थामा चावहिलको ओम अस्पतालमा उपचाररत नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा। सशांक कोइरालाको दिउँसोको अवस्था बिहान ८ बजेको जस्तै रहेको छ । डा। कोइरालाको गम्भीर एवं स्थीर अवस्थामा चावहिलको ओम अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ । डा. भगवान कोइराला, डा. अर्जुन कार्कीसहितको टोलीसंगै डा. कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न गएका एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले हाम्राकुरासंग कुरा गर्दै ८ बजेको अवस्थाजस्तै स ... बाँकी अंश»